10 PC Games nke chọrọ ole na ole chọrọ | Akụkọ Ngwa
Egwuregwu PC 10 chọrọ ole na ole achọrọ
Paco L Gutierrez | 14/11/2021 14:00 | Emelitere ka 14/11/2021 16:32 | General, Videogames
Nkà na ụzụ na-aga n'ihu site na mmali na oke na anyị nwere ike ịhụ nke a na-egosipụta n'akụkụ ọ bụla nke ndụ anyị. N'ime ụwa egwuregwu vidiyo, a naghị ahụ ọganihu a anya, anyị na-ahụkwa egwuregwu ndị ọzọ nwere ikike eserese dị ukwuu na ụwa sara mbara. Nke a pụtara na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n'ihu na-egwu egwuregwu kacha ugbu a, ndị otu anyị ga-ata ahụhụ karịa igbu ha., ebe ọ bụ na ha chọrọ ka anyị nwekwuo ike.
N'elu ikpo okwu dị ka consoles, anyị enweghị nsogbu a, n'ihi na kama ọ dị mkpa iji melite akụrụngwa, ọ bụ ndị mmepe na-achọ ịkwalite egwuregwu ha ka a ga-egbu na sistemụ ọ bụla. Nke a anaghị eme na PC ebe anyị ndị ọrụ bụ ndị ga-ahazi egwuregwu ma ọ bụ akụrụngwa anyị ka ha nwee ọ enjoyụ egwuregwu vidiyo n'ụzọ kwụsiri ike, ya mere. N'isiokwu a, anyị ga-enyere gị aka site n'ịme elu nke 10 egwuregwu kacha mma onye anyị nwere ike soro otu ochie ma ọ bụ karịa dị umeala n'obi egwuri egwu.
1 Kedu ihe achọrọ maka egwuregwu?
2 Egwuregwu 10 kacha mma nwere obere ihe achọrọ
2.1 A kpọlitere Diablo 2
2.3 Mpịaji ga-aga
2.4 Afọ nke alaeze ukwu 2 mbipụta akọwapụtara nke ọma
2.5 Ndagwurugwu Stardew
2.6 Ulo ogwu abuo
2.7 nchara na-
2.9 N'etiti U
Kedu ihe achọrọ maka egwuregwu?
Egwuregwu vidiyo bụ sọftụwia chọrọ ngwaike ka ọ rụọ ọrụ, ihe ndị a chọrọ sitere na processor, ndịna-emeputa, ụdị ebe nchekwa na ọnụọgụgụ, ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ n'onwe ya. Egwuregwu ọhụrụ ahụ bụ, ọ na-ajụkarị maka ike yana ngwa ọgbara ọhụrụ na nke ugbu a. Ma enwere ihe ndị ọzọ na ya bụ egwuregwu indie n'agbanyeghị na ọ dị ọhụrụ, na-agba ọsọ na ngwaike ochie na nke kacha nta nso.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na ịzụrụ kọmputa ọhụrụ anaghị enye gị ohere ịnweta egwuregwu niile dị ugbu a, ebe ọ bụ na e nwere ụdị dị iche iche nke ihe ndị dị na ya, ya mere kọmputa ochie nke dị elu ga-anọgide na-enwe ike karịa kọmputa ọhụrụ. n'etiti ma ọ bụ obere njedebe. Anyị nwere ike ịhụ nke a karịsịa na nso nke Laptọọpụ, ebe anyị nwere ike ịhụ kọmpụta ọhụrụ zuru oke nke na-enweghị ike ịmegharị egwuregwu kacha mkpa. Nke a bụ n'ihi na ihe ndị dị na kọmpụta ndị a dị ọnụ ala ma ọ bụ ejikọta ya na bọọdụ n'onwe ya ma haziri ya maka ọrụ ndị kachasị kwa ụbọchị.
Iji hụ na PC anyị na-emezu ihe egwuregwu chọrọ, ọ kacha mma iji mmemme ahụ CPU-Z ma jide n'aka na ihe ndị dị na kọmpụta anyị dakọtara na opekempe achọrọ nke egwuregwu a na-ekwu. Enwere ike ịhụ ihe egwuregwu chọrọ na Steam ma ọ bụ ụlọ ahịa Epic n'onwe ya.
Egwuregwu 10 kacha mma nwere obere ihe achọrọ
A kpọlitere Diablo 2
Ọ bụ ihe ama ama n'etiti oge ochie nke ejirila ngalaba eserese ọhụrụ eweghachite ọhụrụ. Egwuregwu vidiyo a bụ maka a RPG ochie, ebe ọrụ ugbo na imepụta otu anyị bụ akụkụ dị oke mkpa nke egwuregwu ahụ. Ụdị mbụ ahụ malitere n'afọ 2000 wee gbanwee ụdị ọrụ omume, ghọọ onye ọsụ ụzọ n'ụdị egwuregwu vidiyo a.
Egwuregwu vidiyo na-apụta maka omimi ya mgbe ị na-eke agwa anyị ma kwalite ya na oke a na-atụghị anya ya, na-eke anụ ọhịa nwere ike ibibi ọtụtụ ndị iro n'otu ihe. Anyị nwere ọnọdụ multiplayer ihe ruru 8 ọkpụkpọ co-op site na Battlenet. Na mgbakwunye na ịkọrọ ndị enyi 7 ndị ọzọ ahụmahụ anyị na-ekpochapụ ndị mmụọ ọjọọ, anyị nwekwara ike ịzụ ahịa na duel na ha, si otú a na-eme egwuregwu na-enweghị ngwụcha ohere, site na nke anyị adịghị akwụsị ịchọpụta ihe nzuzo.
Anyị nwere ike zụta Diablo 2 akpọlitere n'ọnwụ na ụlọ ahịa Battlenet maka € 39,99
Ị nweghị ike tufuo Minecraft n'elu nke ọ bụla bara uru nnu ya, na-erughị na nke a, anyị na-achọ ọrụ kacha mma na obere ngwaike. Ọ bụ egwuregwu nke Action ọrụ nke anyị na-emekọrịta ihe na ụwa mepere emepe dabere na owuwu na ọrụ ugbo. Anyị nwekwara ike ịkọrọ ndị enyi anyị ahụmahụ site na netwọk ma na-eche ihe ịma aka nke ụwa ọ bụla na-ewetara anyị ihu.
Ọ bụ ezie na egwuregwu ahụ buru ibu, eserese ya bụ ihe ọ bụla na-achọsi ike, yabụ otu ọ bụla ga-enwe ike ịkwaga ya n'enweghị nsogbu. Ogologo oge ya enweghị ngwụcha yabụ anyị agaghị ewepụ onwe anyị na PC anyị ma ọ bụrụ na anyị achọghị n'ime ọtụtụ awa.
Anyị nwere ike zụta Minecraft na Steam maka € 19,99
Nna asọmpi mbụ onye shootters, ọ bụkwa ihe undemanding egwuregwu na ngwaike dị ka ọ na-eji a pụtara ochie isi na a obere gbanwere kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ ezie na egwuregwu ahụ na eserese adịghị mma nke ukwuu, ọ bụ ihe kacha atọ ụtọ anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ egwuregwu ịgbapụ n'ịntanetị.
Usoro ahụ dị mfe, agha na-apụta n'etiti otu abụọ ma anyị na-ahọrọ ma ọ bụ ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị na-eyi ọha egwu.Naanị ebumnuche anyị bụ imeri. N'ezie, ndị uwe ojii ga-emerịrị ihe mgbawa ahụ nke onye na-eyi ọha egwu tinyere ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eyi ọha egwu, ị ga-egbochi ndị uweojii ka ha kwụsị ya.
Anyị nwere ike ịzụta CSGO na Steam n'efu
Afọ nke alaeze ukwu 2 mbipụta akọwapụtara nke ọma
Oge a anyị na-ezo aka na atụmatụ egwuregwu dị mma maka PC, ọ pụghị ịbụ ndị ọzọ karịa Age Age of Empires na njedebe ikpeazụ ya dị elu. Ma na ndị a ndozi egwuregwu nwere nnọọ ala kacha nta chọrọ na ọ ga-enwe ike ịgba ọsọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọ bụla.
Ụdị nke kpochapụrụ a na-emezigharị gụnyere mkpọsa 3 na mmepeanya 4 nke anyị ga-eji na-arụ ọrụ awa ole na ole iji mepụta ndị agha anyị iji merie mpaghara ndị iro, ugbu a nwere eserese ka mma mana na-ejigide isi ihe dọtara anyị ihe karịrị afọ iri gara aga.
Anyị nwere ike zụta AOE 2 DE na Steam maka € 19,99
Jewel, bụ okwu zuru oke iji kọwaa egwuregwu a, nke ma ndị egwuregwu na ndị nkatọ gosipụtara dị ka ihe kacha mma n'agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi maka ihe ịchọ mma ochie ya. Ọ nwere ike ịdị ka ọ dị mfe mana egwuregwu ahụ gụnyere ihe omimi miri emi na ogologo oge dị ka ndị ọzọ ole na ole, n'ime ya anyị ga-enye ndụ ugbo ochie nke anyị ketara n'aka nna nna anyị.
Nhazi ahụ dị ka ọ dị mfe, mana n'egwuregwu a na-egwu egwu, ọ bụghị naanị na anyị ga-elekọta ihe ọkụkụ na anụ ụlọ niile nke ugbo anyị.Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-amakwa mmekọrịta anyị na ndị ọrụ ugbo ndị ọzọ na imeziwanye àgwà anyị na ebe obibi anyị. Anyị nwere ohere inyocha ugbo ndị ọzọ.
Anyị nwere ike zụta Stardew Valley na Steam maka € 13,99
Ulo ogwu abuo
Ọ bụrụ na, dị ka m, ị bụ otu n'ime ndị nwere anụrị ụlọ ọgwụ akụkọ ifo afọ 20 gara aga, ị ga-anụ ụtọ ụlọ ọgwụ abụọ a, ọ bụ atụmatụ na egwuregwu njikwa akụrụngwa nke anyị na-elekọta ụlọ ọgwụ na-adịghị akwụsị ịbịarute. ndị ọrịa na-agba ara na anyị ga-agakwuru ha ihe ọ bụla ọrịa ha nwere.
Ebumnuche anyị ga-abụ ịkpachara anya ka ndị ọrịa anyị bịarutere n'enweghị nsogbu na ndụmọdụ ha n'otu n'otu wee hapụ ụlọ ọgwụ anyị nke ọma.. Mmetụta ọchị na-aba ụba yana esemokwu mgbe anyị na-alụ ọgụ na nnukwu ọrịa na-efe efe ma ọ bụ ebili mmiri oyi n'etiti ihe omume ndị ọzọ.
Anyị nwere ike zụta ihe ọchị abụọ Point Hospital na Steam maka € 34,99
Ịlanahụ na ụwa mepere emepe gbakọtara na egwuregwu a dị egwu nke ahụ na-atụ aro ka anyị dị ndụ n'ime ụwa nke post-apọcalyptic ebe ndị iro anyị bụ ndị egwuregwu ịntanetị ndị ọzọ. Ha ga-agbalị igbu anyị na-apụnara anyị ihe iji nweta ihe onwunwe anyị, jiri ngwá agha ma ọ bụ ọnyà.
Anyị ga-amalite njem ahụ n'aka efu Mana ka anyị na-eme nyocha, anyị ga-achọpụta akụrụngwa na usoro nri iji mee ebe obibi anyị, dị ka ngwa ọgụ ma ọ bụ ngwa ọrụ. Oge dị mkpirikpi ebe ọ bụ na ihe ize ndụ na-ezobe mgbe niile, anyị amaghịkwa ihe anyị ga-achọta, ebe ọ bụ na ndị iro nwere ike imekọrịta ihe iji buso anyị agha ma ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ ihe onwunwe na anyị ji ngwá agha dị mma.
Anyị nwere ike zụta nchara na Steam maka € 39,99
Egwuregwu nke kpalitere mmetụta n'oge ọrịa na-efe efe bụ egwuregwu oriri na ọṅụṅụ a jupụtara na obere egwuregwu ọchị na-acha odo odo na-ejikọta anyị na atụmatụ ntụrụndụ nke anyị na-asọmpi ruo 60 jugadores. Egwuregwu ahụ nwere usoro ule na ihe mgbochi nke anyị ga-eji ngwa ngwa karịa ndị na-emegide anyị iji merie.
Akụkụ teknụzụ dị nnọọ mfe n'ihi ya, anyị agaghị enwe nsogbu mgbe anyị na-eme ya na kọmputa anyị, n'agbanyeghị otú ọ bụ isi.
Anyị nwere ike zụta ndị nzuzu Fall Guys na Steam maka € 19,99
Egwuregwu ọzọ nke kpatara mmetụta n'etiti ndị na-egwu mmiri bụ ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ, ebe anyị na-ezute n'etiti mmadụ 4 na 10, n'ime ìgwè abụọ a bụ ebe mmadụ abụọ bụ ndị aghụghọ na-achọ igbu ndị ọrụ ụgbọ mmiri. Ọ bụ ezie na ebumnobi nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ bụ ịrụ ọrụ ụtụtụ ha n'ụgbọ mmiri, ndị aghụghọ aghaghị ịkpata mbibi site n'iji ụgbọ mmiri eme ihe.
Omume anyị ga-ekewa ndị ọrụ ụgbọ mmiri, anyị ga-ejikwa ohere ahụ mgbe otu n'ime ha nọ naanị ya gbuo ya, ebe ọ bụ na onye ọzọ n'ime ụgbọ mmiri ahụ hụrụ anyị ka anyị na-egbu ọchụ, ọ ga-enyefe anyị, ndị ọrụ ụgbọ mmiri ga-achụpụkwa anyị n'ụgbọ mmiri. . Ọbụna mgbe a nwụsịrị, ndị egwuregwu na-aga n'ihu na-egwu egwu dị ka ndị na-ekiri ihe na-enweghị ike ịmekọrịta ndị ọzọ, ma na-arụ ọrụ.
Anyị nwere ike ịzụta n'etiti anyị na Steam maka naanị € 2,99 ugbu a na nkwalite
Anyị na-emecha elu na ihe bụ ma ndị nkatọ na maka onye ọkpụkpọ, otu n'ime ihe ịchọ mma nke afọ iri gara aga. Action na agbapụ na-ahụkarị mekaniki nke nyiwe nke anyị nwere ike ịhụ na egwuregwu dị ka MetalSlug mana nwere ọmarịcha mma setịpụrụ na cartoon ochie, yiri nke mbụ ihe nkiri Disney n'oge ahụ na 30s.
Emehiela ihe, ọmarịcha mma ya mara mma apụtaghị na anyị na-eche ihu ije, njem ahụ na-apụta maka ihe isi ike ya ya mere ịgafe ụwa macabre ha juputara na ndị iro ga-abụ ihe ịma aka nye onye isi anyị. Ezigbo ọmarịcha nka nke anyị ga-egosipụta ee ma ọ bụ ee, ọkachasị n'ịtụle na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọ bụla ga-enwe ike iji nwayọ mee ya.
Anyị nwere ike zụta Cuphead na Steam maka € 19,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Egwuregwu PC 10 chọrọ ole na ole achọrọ
Kedu ihe ndetu ọjọọ, enweghị njikọ yana ụgwọ niile enwetara Unfollow !!
Zaghachi na israHell
Daalụ maka ntụnye ahụ, agbakwunyere njikọ. Anyị ga-edeba ama ịgbakwunye nkwanye naanị egwuregwu efu n'ọdịnihu.
Zaghachi Paco L Gutiérrez
Nyochaa AOC Gaming U28G2AE / BK
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, ọ bụ egwuregwu na ọ bụ ego efu [Analysis]